मलाइका ले खोलिन् बेडरुमको राज, केटाको बिषयमा भन्छिन् – दाह्री भएको केटा मन पर्छ – Karnalikhabar
मलाइका ले खोलिन् बेडरुमको राज, केटाको बिषयमा भन्छिन् – दाह्री भएको केटा मन पर्छ
मलाइका अरोराको सुन्दरतालाई उमेरले छेक्न सकेको छैन । यही कारणले गर्दा ४७ वर्ष पुगेपछि पनि उनी नयाँ अभिनेत्रीलाई चुनौती दिन पछि पर्दिनन् । आज पनि उनी परफेक्ट र सुन्दर देखिन्छिन् । उनको जिम र योगका भिडियोहरू लगभग हरेक दिन भाइरल हुन्छन् । कमेन्टमा सबैले उनलाई अहिलेसम्म जवान र सुन्दर रहने रहस्य सोध्छन् ।
मलाइकाले आफ्नो फिटनेसको श्रेय योग र जिममा बग्ने पसिनालाई दिन्छिन् । यसका साथै उनी आफ्नो खानपानमा पनि निकै ध्यान दिन्छिन् । उनलाई स्वस्थकर खानेकुरा मात्रै खान मन पर्छ । यससँगै मलाइकाले निकै कम फिल्म गरेकी छिन्, त्यसपछि पनि उनी आफ्नो पर्सनल लाइफ र त्यसमा आएका उतारचढावका कारण चर्चामा रहन्छिन् ।
उनको अरबाज खानसँगको सम्बन्ध होस् वा अर्जुन कपूरसँगको प्रेम सम्बन्ध, हरेक विषयलाई मानिसले चासो दिने गरेका छन् । आजकल उनी अर्जुन कपूरसँग खुलेर प्रेममा छिन्, र उनीसँग अर्जुन जताततै देखिन्छिन् । मलाइका उन अभिनेत्रीहरु मध्ये गनिन्छन् जो आफ्नो पर्सनल लाइफको बारेमा खुलेर कुरा गर्न हिचकिचाउँदैनन् । मलाइकाले नेहा धुपियाको टक शोमा उपस्थित हुँदा पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा धेरै कुरा भनेकी थिइन् ।
यस च्याट शोमा उनले अरबाजसँगको सम्बन्ध बिछोडदेखि बेडरूममा रोमान्स गर्ने धेरै प्रश्नको जवाफ दिएकि छिन् । नेहाले सोधिन्,– ‘तिमीलाई केटाहरू कस्तो लाग्छ ? यसबारे मलाइकाले आफूलाई दाह्री भएका केटाहरू मन पर्ने र सेन्स अफ ह्युमर राम्रो भए रमाइलो हुने बताइन् ।यस च्याट शोमा नेहाले उनीसँग उनको बेडरूमको रहस्य पनि जान्न चाहन्थिन् ।
मलाइकालाई सबैभन्दा बढी कुन पोजिसन मन पर्छ भनेर नेहाले सोधिन् । जसको जवाफमा मलाइकाले आफूलाई सबैभन्दा माथिल्लो तलामा बस्न मन पर्ने बताइन् । यो जवाफ दिनेबित्तिकै दुवै अभिनेत्री हाँस्न थाले । मलाइकाको यो जवाफ त्यतिबेला निकै भाइरल गरे पनि धेरैलाई यो जवाफ मन परेको पनि थिएन ।
अघिल्लो - भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भए पनिकांग्रेसको जिल्ला सभापतिमा विजयी
सुनको मूल्य घट्याे, कतिमा काराेबार हुँदै? - पछिल्लो